अभिमत: अब बाहुन कता जाने ?
अब बाहुन कता जाने ?
मेरा बाउ आमा पश्चिम नेपालको गुल्मीमा जन्मिए । आधा उधि उमेर त्यतै कटाएर झरे मधेश सुन्दर भविष्य खोज्दै । आफुले त यो डाँडा पाखामा दुख पाइयो पाइयो, छोरा छोरीले पढेर सुख पाउन, बरु एकै छाक खाउन समथरमा हिँडुन भन्ने रहेछ इच्छा । सरासर आएर बसे चितवन औलो लाग्ने बेलैमा ।
चितवनको त्यो सानो गाउँमा त्यतिबेला बिजुली बत्ती थिएन । धुलो माटो बुङ् बुङ उड्ने साना गल्ली थिए। वर्षामा उर्लिँदै बग्ने दुई तिन वटा खोला तरेर ओहोरदोहोर गर्नुपर्थ्यो टाँडी बजार पुग्न । स्थानिय स्कूलमै पढियो । गाउँका धेरै बाहुन जो पछि औलो नियन्त्रण भएपछि झरेका थिए, ति मध्ये अधिकांशले सोझा थारुलाई ठगेका हुनाले हाम्रो उठ बस तिसँग चलेन । हाम्रा निकट, हितैषी सबै तिनै सोझा थारु भए । मेरा वाल्यकालका सबै साथी थारु थिए। जंगल जाउ तिनै सित । वन जाउ उनैसित । गोठालो जाने उनीहरुसितै । घाँस काट्ने तिनको जमिनमा । चाड पर्व दशैं र तिहार, तिज र जनैपूर्णे आएपनि खासै जम्दैनथ्यो । नाता कुटुम्ब सबै गुल्मीमै छोडेर बाबु आमा झरेकालेपनि हाम्रो चाडपर्व उति जम्थेन ।
बाहुनको छोरो भएपनि म खैचडी बजाउन जानिन बरु थारुको ढोलक ठोकें । दशैं गित सुनिन बरु थारु गित गुन्गुनाएँ । बाहुनका नाच जानिन बरु थारुका लठ्ठि नाच, डम्फू नाच, झर्रा र जितिया नाच नाचें । तिनैसित गएर माछा मारिन्थ्यो । बल्छि खेल्न तिनै थारुले सिकाए। जाल हान्न तिनैले देखाए । घुँगि तिनैको घरमा गएर लुकिलुकि खाएँ ।
थारुको खान्की शरिरमा झुण्डिराख्यो । तिनको पर्वमा घरैमा बोलाउन आउँथे ‘चल सङहाती’ (जाउँ साथी) भन्दै । आफ्नो चाडमापनि त्यसैगरि आउँथे । थारु भाषा कतिसम्म तगडा थियो भने थारु साथीहरुपनि आदरार्थी शब्दहरु प्रयोग गर्न अन्कनाउँदा मकहाँ सोध्न आइपुग्थे । मलाई थर बाहुनको भएपनि कहिल्यै म बाहुन हुँ, माथिल्लो जातको हुँ भन्ने सोच आएन । थारु साथीहरु भन्दा भिन्न भएर कहिल्यै सोचिएन आफु हुर्किँदा । थारुहरुलेपनि त्यस्तो अलग थलग बनाएर सोचेनन ।
मैले हाम्रो पूर्खा अन्यत्रैबाट आएको हो । यो जमिन मेरो होइन । यहाँको माटोमा मेरो अधिकार लाग्दैन भन्ने कहिल्यै सोच्न परेन । हाम्रो मूल थलो अन्यत्रै हो भन्ने डर, त्रास, धम्की र ग्लानी सहनु परेन। आफु हिँडिराखेको, खेलेको थलो तिमीहरुको होइन कसैले भन्ला एकदिन भन्ने एक पित्को सोच्नुसम्म परेन । मेरालागि चितवनबाट दूरभूमीमा देखिने मधुरा हिमाल उति बिघ्न सरोकारका विषय थिएनन् । त्यहि चितवन सबथोक थियो । त्यसैको मायाले मूटु भरिको थियो । र अहिलेपनि छ । किनभने मेरा पूर्खा जुन ठाउँबाट आए त्यसको मलाई अहिलेपनि उति चाख, चिन्ता र माया छैन जति म जन्मिएको चितवनको छ ।
तर अहिले म सुन्दै छु चितवन पहाडेहरुको होइन रे । पहाड भन्ने भ्रमण र कामको शिलशिलामा देखे भोगेको म अहिले आएर पहाडे हुँदै छु । बनाइँदै छ । माओवादीलेपनि जातिय आधारमा भागवण्डा गरिसकेको छ । माओवादीको बिभाजनमापनि चितवन म बाहुनको राज्य पर्दैन । जहाँ मैले पहिलो धरती टेकें, जहाँको पहिलो हावा लिएँ, जहाँको माटोले मेरो जिवन उभ्यायो अहिले त्यो धरतीमाथि मेरो मुल अधिकार लाग्दैन रे । त्यसो भए म कहाँ जाउँ त ?
एकथरी मानिसहरु चितवन मधेशीहरुको भनेर दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरुको भनाईमा धोतीको एक फन्को मारेर पाँच वर्ष पहिले चितवन कोहि झरेको थियो भने उसको मूल थलो हो रे । तर मैले जिवनको पहिलो आँखा खोलेको माटो मेरो होइन रे । अर्काथरी भित्रि मधेश र चुरे पहाडलाई समेटेर हाम्रो राज्य भन्दै घोषणा गर्दै छन् । चुरे मधेश राज्य बनाउने रे । त्यसमापनि म अटाउने भईन । चितवन थारुहरुको हो भन्दै थारुवान राज्य घोषणा गर्नेहरु त झन बलिया देखिएका छन् । म थारु परिन र यो राज्यमापनि मेरो पहिलो अधिकार लाग्ने भएन । अर्काथरी छन्, तिनले चितवनलाई बोटे, मुसहर यस्तै अन्य साना तिना जातिको राज्य माग गरिरहेका छन् । बोटे र मुसहरको राज्यमा त झन कसरि पर्ने ?
नेपा: राष्ट्रिय पार्टीले त झन दक्षिणमा मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा चितवनको नारायणघाट सम्म नेवार राज्यको माग गरेको छ । सुनुवार, माझी, दनुवार, जिरेल, थामीपनि यस राज्य संघमा सामेल हुन चाहेमा स्वागत गरिने रे । तिनको जन्मसिद्द अधिकारको कुरा छैन कि सामेल गरिने भनेर उनीहरुले भनेका छन् । त्यसको अर्थ कि त नेवार राज्यको सबै मनपरी सहेर, आफ्नो परिचय र अस्तित्व गुमाएर बस। नत्र भने लखेटिन तयार होउ । अनि जुन जातीको कतै आफ्नो राज्य छैन तिनले जुन जाति अन्तर्गतको राज्यमा बस्छन् त्यहि जातिको भाषा प्रयोग गर्न मञ्जुर भए मात्रै त्यो जाति अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने रे ।
एक मधेश एक प्रदेश बनाउन कम्मर कस्नेहरुले त पहाडी मूलका सबैलाई लखेट्ने घोषणा उहिल्यै गरेका छन् । यि आआफ्ना माग, दाबी र योजना अनुसार जुन राज्यमा परेपनि म बाहुनको पहिलो अधिकार नलाग्ने भैहाल्यो । म त कि दबिएर बस्नुपर्‍यो । कि त जन्मथलो छोडेर पहाडेको बिल्ला भिर्दै भाग्नुपर्‍यो । आदिवासीको राज्यमा गैह्र आदिवासीको वसोवास रहेछ भने ति सबैले त्यो राज्यको आदिवासी भाषा सिक्नै पर्ने रे ।
नेपालमा अहिलेसम्म बाहुन, सन्यासी र दलितले आफ्नो संघिय राज्य दाबी गरेका रहेनछन् । यिनको आफ्नो राज्यनै छैन सायद । बाहुन र दलित त झन जहाँसुकै छरिएका छन् । सबैले आआफ्नो राज्य माग्ने । आफ्नै जातिय राज्य बनाउने । अरु जातिकाले कि त चुपचाप सहेर बस्नु पर्ने कि त भाग्नुपर्ने हो भने हामी बाहुन कहाँ जाने त ?
म चितवनमा जन्मे हुर्केको अब यो कि त मधेसी, कि थारु वा नेवार राज्यमा पर्नेभयो । उता बाबु बाजे जन्मेको थलो खोज्दै गुल्मी जाउँभनेपनि त्यसलाई कसैले मगर, कसैले के राज्यमा बर्गिक्रित गरेका छन् । उसो भए म कहाँ जाउँ त ?
अस्ति भर्खर सिमा पारीबाट एउटा लगौटी हल्लाउँदै म मधेशी हुँ, म राजवंशी हुँ भनेकै भरमा, हम ऐसा हें उईसा हें भनेर हिन्दी भाषा बोलेकै भरमा, कहाँ बाट किन र कसरि केका लागि आएको हो बुझ्दै नबुझी दुई चार टोकरी आलू र प्याज बेच्न दैलो दैलो चहारेकै भरमा
नेपाल छिर्नेको जातिय राज्य हुने मेरो नहुने ? नेपाली अधिकारीलाई दुई चार हजार पोल्टामा थमाएर नेपाली नगारिकता हात पारेकै भरमा जातिय राज्यको हैसियत पाउने, तर म जन्मजात आफ्नो थात थलो नछोड्ने चाहिँ राज्यबिहिन हुने ? भाषा भाषै हो नी, मगर भाषा, नेवार भाषा, मैथीली, थारु र अन्य भाषा बोल्ने सबैको राज्य कोरिने तर म नेपाली भाषा बोलेकै आधारमा, बाहुन भएकैले राज्यबिनाको हुने ?
मेरो राज्य कहाँ ? कि जातिय राज्य चाहियो भन्दै बाहुनलेपनि खुकुरी अँठ्याएर हिँड्ने ? देश भागवण्डा गर्ने, जातजातिको राज्य छुट्याउने, राष्ट्र टुक्र्याउने नेता हो भन म कहाँ जाउँ ? देखाइदेउ मेरो राज्य कुन हो ? चाहियो मेरो राज्य पनि !!!!
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 7:42 AM
Dinesh Chhetri December 29, 2009 at 1:45 AM
Adams Kevin October 28, 2014 at 3:16 PM